Kooxda Paris Saint-Germain Oo Kooxda Chelsea Ka Calaamadsatay Weeraryahan, & Xagaaga Oo Ay Wax Walba U Samayn Doonto Si Ay U Hesho – Kooxda.com
Home 2018 February France, Ingiriiska, Wararka Maanta Kooxda Paris Saint-Germain Oo Kooxda Chelsea Ka Calaamadsatay Weeraryahan, & Xagaaga Oo Ay Wax Walba U Samayn Doonto Si Ay U Hesho
Kooxda Paris Saint-Germain Oo Kooxda Chelsea Ka Calaamadsatay Weeraryahan, & Xagaaga Oo Ay Wax Walba U Samayn Doonto Si Ay U Hesho
February 5, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay boorsooyinka lacagtu ku jirto u soo qaadanayso dhanka kooxda chelsea iyada oo ka calaamadsatay xiddig ay aaminsantahay in uu wax weyn u qaban doono kooxdooda xilli ciyaareedka dambe.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay u dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka kooxda chelsea ee Alvaro Morata marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga xagaagu.
Xiddiga reer Spain ayaa Blues ku qaadanaya xilli ciyaareed isku dhex jir ah isaga o 12 gool dhaliyay ilaa haatan tartamada oo dhan laakiin waxa uu kulamadii ugu dambeeyay ku dhibaatoonayaa dhaawacyo joogto ah.
Sida laga soo xiganayo Paris United hogaamiyayaasha horyaalka France ayaa doonaya in ay xiddiga reer Spain ku soo dalabaadaan boorso lacag ah si ay xilli ciyaareedka dambe uga dajiyaan garoonka Parc des Princes.
PSG ayaa haatanba kooxda ku haysata xiddigaha Edinson Cavani, Neymar Iyo Kylian Mbappe laakiin Agaasimaha kooxda ee Antero Henrique ayaa 25 jirkan u arka xiddig tartan la gali kara xiddigaha weerarka uga ciyaara xilli ciyaareedka dambe.
Kulankii ugu dambeeyay ee uu Morata u ciyaaray kooxda chelsea ayaa ahaa lugtii 2-aad ee tartanka FA Cup-ka markaas oo kaarka cas loo taagay kadib laba digniinood oo la siiyay.